Blogging Corporate: Kajawaabida khilaafka
Marwalba Keen Dagalka Guriga
Talaado, Juun 15, 2010 Axad, Janaayo 19, 2014 Douglas Karr
Kulano aad ufiican la yeeshay hay'ad halkan Indianapolis ah oo ka shaqeyneysa sidii loo hubin lahaa in macmiilkoodu uu leeyahay adag Istaraatijiyad blogging shirkadeed. Waxay ku bilaabanayaan bilow wanaagsan wax badana waan ka hadalnay muranka iyo baloog garaynta. Barta gaarka ah ee ay dejinayaan waxay ka hadlaysaa mowduuc dhaliil uga soo jiidan kara kuwa leh fikradaha iska soo horjeeda.
Waxaan daawaday dhowr shirkadood oo ka falcelinaya dhaleeceynta xun iyagoo isku dayaya inay si macquul ah u difaacaan ama ugala hadlaan mowqifkooda ku saabsan ka soo horjeeda blog. Istaraatiijiyad xun. Markaad u timaadid balooggeyga si aad u difaacdid jagadaada, si fudud igama doodi doontid, waxaad isku arki doontaa inaad ka doodayso ciidan raacsan fikrad ahaan kuwaas oo si joogto ah u akhriya qoraalkayga.
Badanaa, markii khilaaf ka bilowdo balooggeyga, waan iska degaa oo sugaa. Caadi ahaan, akhristayaashu way u iman doonaan badbaadintayda waxayna qofka u jeexi doonaan shilal. Tani waa waxa dhacaya markii lagaa xanaajiyo inaad dagaalka u qaaddo hantida kooxda ka soo horjeedda. Si fudud uma doodaysid baloog-ga - waxaad ku murmeysaa shabakadda ka dambeysa baloogga. Markaad doodaysidna, dareenka ayaa sii kordhaya eng kaqeybgalka bulshada ayaa koraya, raadinta ayaa sii kordheysa waxaadna kaheleysaa qoraalkan kasoo horjeedda natiijooyinka aad shirkadda.
Had iyo jeer guriga keena dagaalka. Haddii blogger wax ka qoro adiga ama ganacsigaaga si xun, uga faa'iideyso balooggaaga si aad uga jawaabto. Xitaa uma baahnid inaad sheegtid… laakiin xiriiriye ku soo noqoshadooda ayaa caadi ahaan soo jiidan doona dareenkooda si ay u arkaan jawaabtaada. Waxaan rajeyneynaa, inay ku soo noqon doonaan balooggaaga oo ay faallo ka bixin doonaan. Waxaa laga yaabaa inay si fiican u yaqaanaan! Waa inaad si fiican u ogaataa, sidoo kale.
Waxa kaliya ee ka xun shirkad si toos ah uga jawaabta barta mucaaradka ayaan haba yaraatee wax jawaab ah ka bixin. Warbaahinta cusub, wax jawaab ah looma barbar dhigo hubris iyo la'aanta xaqiiqda. Blogger aan ka jawaabin dhaleeceynta wax dhisaysa waxaa badanaa loo diidaa inuu yahay mid been abuur ah… kuma hareeraysan inay noqdaan kuwa hufan laakiin waa inay naftooda kaliya horumariyaan. Shirkadooda iyo shirkadooda blog-ka waxay lumiyaan kalsoonida iyo aqriska.
Had iyo jeer guriga keena dagaalka!